Lufthansa hanidina tsy an-kiato avy any Frankfurt mankany San José, Costa Rica amin'ny 2018
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa hanidina tsy an-kiato avy any Frankfurt mankany San José, Costa Rica amin'ny 2018
Vaovao tsara ho an'ireo mpankafy rehetra an'i Amerika Afovoany: i Lufthansa dia hampiditra ny fifandraisana Frankfurt - San José amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina fahavaratra 2018. Manomboka amin'ny 29 martsa 2018, sidina tsy an-tampon'ny Lufthansa dia hiainga isaky ny alakamisy sy asabotsy avy any Frankfurt mankany renivohitra Costa Rica, ilay 'paradisa maintson'i Amerika Afovoany'.
Ny fifandraisana dia ny fifandraisana faharoa natolotry ny orinasa tsy an-kiato avy any Frankfurt mankany amin'ity faritra ity - ny voalohany dia ny fifandraisana avy any Frankfurt mankany Panama. Ireo fifandraisana roa ireo dia mifameno tanteraka. Azonao atao izao ny miondrana an-tsambo mankany San José impito isan-kerinandro avy any Frankfurt: indroa tsy mijanona miaraka amin'i Lufthansa, na in-dimy miampita an'i Panama miaraka amina sidina fohy miaraka amin'i Copa Airlines mpiara-miasa amin'i Lufthansa.
Costa Rica dia manambatra tanimbary mahavariana, ala mikitroka, fahalalahana any Karaiba ary moron-dranomasina any an-danitra miaraka amin'ny valan-javaboary sy ala mando, ary noho izany dia malaza indrindra amin'ireo mpandeha izay manome lanja ny fizahan-tany manan-danja eo amin'ny tontolo iainana.
Ny sidina mankany San José dia mampiasa Airbus A340-300, izay misy seza 279 manarona ny Class Business, Economy Premium ary Economy Class. LH518 dia nandao ny hub Lufthansa Frankfurt tamin'ny 13:45 ary tonga tao San José tamin'ny folak'andro tamin'ny 17:55 ora teo an-toerana. Ny sidina miverina dia miainga avy any San José amin'ny hariva amin'ny 19:50 ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ny andro manaraka amin'ny 15:10 aorian'ny sidina manodidina ny 11 ora.
Raha mila fanazavana fanampiny sy hamandrihana ireo sidina Lufthansa dia mankanesa any amin'ny LH.com amin'ny Internet na miantso ny Lufthansa Service Center amin'ny +49 (0) 69 86 799 799 (tahan'ny tsipika raikitra). Ny sidina dia azo vakina ihany koa ao amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany Lufthansa, ary koa amin'ny mpanohitra fivarotana Lufthansa ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Ilay fifandraisana vaovao indray mipi-maso
• indroa isan-kerinandro (Alakamisy, Sab hatramin'ny 29 martsa 2018)
• Vidiny: avy amin'ny 881 euro, ao anatin'izany ny haba sy ny sarany
• Halavirana: 9.362 km (5.055 kilaometatra nautika)
Antigua sy Barbuda dia mandray an'i Chris Blue, mpandresy "The Voice", ary ny vadin'izy ireo mandritra ny volan-tantely
Nevis Mango & Festival Sakafo mihoatra ny nandrasana rehetra